Karazam-pamokarana herinaratra: fampandehanana sy fampiasa | Green Renewable
Portillo Alemanina | 26/04/2022 12:00 | Energie mahazatra
Ny herinaratra dia tranga voajanahary mety hitranga amin'ny fomba samihafa amin'ny alàlan'ny orinasa mpamokatra herinaratra. Tsy tsotra ny fanontaniana momba ny niandohan'ny herinaratra: tsy maintsy mandeha lavitra izy raha te hampiasaina ho angovo. Etsy andaniny, miankina amin’ny akora fototra sy ny teknolojia ampiasaina kosa ny fahafahan’izy ireo mamokatra sy ny fahaiza-manaony, izany hoe ny habetsahan’ny herinaratra azony avy amin’ny fiovan’ny angovo fototra. Izany no antony hiankinan’ny orinasa mpamokatra herinaratra amin’ny angovo. Ao Espaina, ny tena karazana orinasa mpamokatra herinaratra Izy ireo dia thermal, nokleary, atmospheric ary solar photovoltaic.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ireo karazana toby famokarana herinaratra misy sy ny toetrany.
1.1 Toby famokarana herinaratra mafana
1.2 orinasa mpamokatra rivotra
1.3 orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro
1.4 orinasa mpamokatra herinaratra hydroélectrique
1.5 tobim-pamokarana tondra-drano
2 Ny fomba fiasan'ireo karazana orinasa mpamokatra herinaratra
3 Ny maha-zava-dehibe ny reactor nokleary
Toby famokarana herinaratra mafana
Manomboka mihetsika ny turbine amin'ireo zavamaniry ireo noho ny fiaramanidina etona misy tsindry azo avy amin'ny fanafanana ny rano. Mamokatra herinaratra amin'ny fomba samihafa ny orinasa mpamokatra herinaratra mafana: ao anatin'izany ny hafanana
Classical: Mahazo ny heriny amin'ny fandoroana solika fôsily izy ireo.
Avy amin'ny biomass: Mahazo ny heriny izy ireo amin'ny fandoroana ala, ny sisa amin'ny fambolena na ny voly angovo malaza.
Avy amin'ny fandoroana fako monisipaly: Mahazo angovo izy ireo amin'ny fandoroana ny fako voakarakara.
toby nokleary: Mamokatra angovo izy ireo amin'ny alàlan'ny fission'ny atoma uranium. Etsy an-danin'izany, ny fanafanana rano avy amin'ny masoandro dia manafana ny rano amin'ny fampifantohana ny angovon'ny masoandro ary farany, ny zavamaniry geothermal dia manararaotra ny hafanana avy ao anaty tany.
orinasa mpamokatra rivotra
Rehefa miasa amin'ny lelan'ny turbine rivotra ny rivotra dia mihetsika ny turbine anao. Mba hanaovana izany, dia apetraka ao amin'ny tapany ambony amin'ny tilikambo ny rotor misy lelany maromaro, izay mitodika amin'ny làlan'ny rivotra. Izy ireo dia mihodina manodidina ny axis marindrano izay miasa amin'ny mpamokatra. Voafetran’ny hafainganan’ny rivotra ny fiasan’izy io, ary ny toeram-piompiana rivotra dia mila faritra midadasika. Any Espaina kosa, eo anelanelan'ny 20% sy 30% amin'ny taona ny ora fiasan'ny famokarana herinaratra, sanda ambany raha oharina amin'ny toby mafana sy nokleary, izay mahatratra 93%.
Na izany aza, tsy maintsy tsaroana fa loharano angovo madio izy io ary tsy manimba ny tontolo iainana ireo fametrahana ireo. Ny toeram-piompiana rivotra napetraka tao amin'ny seranan-tsambon'i Bilbao ao Ponta Lucero dia namokatra angovo 7,1 tapitrisa kWh tany Espaina tao anatin'ny dimy volana voalohany niasany. Mahasoa kokoa ireo valan-javaboary ireo ny fananganana amoron-dranomasina, satria ny rivotra dia mirona hivezivezy amin'ny fipoahana ary miorina kokoa noho ny an-tanety.
orinasa mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro
Misy karazany samihafa ireo toby famokarana herinaratra ireo. Anisan'izany, ny orinasa mpamokatra herinaratra mafana amin'ny masoandro dia manararaotra ny hafanan'ny masoandro mba hanafanana ny rano ary mampiasa ny etona vokarin'ny fanafanana mba hanosehana turbine. Misy ihany koa ny famokarana angovo azo avy amin'ny masoandro amin'ny fotovoltaika, satria Ny sela photovoltaic dia tompon'andraikitra amin'ny famadihana ny angovo azo avy amin'ny masoandro ho herinaratra.. Ao Espaina dia manana orinasa lehibe roa izahay: ny valan-javaboary photovoltaic Puertollano sy Olmedilla de Alarcón. Samy any Castilla-La Mancha izy roa.
orinasa mpamokatra herinaratra hydroélectrique
Ny turbin'ireo zavamaniry ireo dia entin'ny fikorianan'ny rano haingana. Manararaotra ny riandrano ireny, na voajanahary, izany hoe riandrano sy renirano tsy mirindra, na riandrano artifisialy ampidirina anaty dobo. Ankoatra ny angovo elektrika afaka mamokatra, zaraina na sokajiana ihany koa araka ny fahefana ananany. Eo amin'ny lafiny iray dia ny orinasa mpamokatra herinaratra lehibe, ny orinasa mpamokatra herinaratra kely ary ny orinasa mpamokatra herinaratra micro.
Mitovitovy amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra hydroélectrique ny fiasany. Ireo anefa dia manararaotra ny fahasamihafan'ny haavon'ny ranomasina eo amin'ny avo sy ny ambany. Ny tobim-pamokarana tondra-drano ihany koa dia heverina fa manararaotra ny fihetsehan'ny onja mba hanosehana turbine. Etsy an-danin’izany, misy koa ny rian-dranomasina, izay manararaotra ny angovo kinetika amin'ny onjan-dranomasina na ny ranomasina. Tsy dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana io fomba fiasa io satria tsy misy tohodrano namboarina hanakorontanana ny tontolo iainana.
Ny fomba fiasan'ireo karazana orinasa mpamokatra herinaratra
Ny tobim-pamokarana herinaratra mafana dia orinasa mpamokatra herinaratra mafana izay mikendry ny hanova ny angovo mafana ho herinaratra. Io fiovam-po io dia atao amin'ny tsingerin'ny turbine etona/rano mafana. Izany no cycle Rankine. Amin'ity tranga ity, ny loharanon'ny etona dia hamokatra ny etona izay mitondra ny turbine.
Ny karazana toby famokarana herinaratra mafana dia ny tsingerina mitambatra. Ao amin'ny orinasa tsingerina mitambatra dia misy tsingerina thermodynamika roa:
Cycle Breton. Ity tsingerina ity dia miasa amin'ny turbine entona fandoroana, matetika entona voajanahary.
Cycle Rankine. Ity dia tsingerin'ny turbine etona-rano mahazatra.
Ao amin'ny toeram-pamokarana herinaratra mafana rehetra, singa telo no takiana mba hamokarana herinaratra:
turbine etona. Ny turbine dia manova ny angovo mafana ho angovo kinetika.
Alternator izay manova angovo mekanika ho angovo elektrika.
Transformer izay manova ny courant azo amin'ny courant alternating ny fahasamihafana mety irina.
Ny maha-zava-dehibe ny reactor nokleary
Ny fusion reactor dia fitaovana iray misy ny fanehoan-kevitry ny fusion nokleary amin'ny solika misy isotope hydrogène (deuterium sy tritium), mamoaka angovo amin'ny endrika hafanana, izay dia mivadika ho herinaratra.
Tsy misy reactor fusion afaka mijinja herinaratra amin'izao fotoana izao, na dia misy aza ny toeram-pikarohana mba handinihana ny fihetsiky ny fusion sy ny teknolojia izay hampiasaina amin'ireo orinasa ireo amin'ny ho avy.
Amin'ny ho avy, ny fusion reactors dia hozaraina ho karazany roa: ireo izay mampiasa confinement magnetika sy ireo izay mampiasa confinement inertial. Ny reactor fusion magnetika dia ahitana ireto singa manaraka ireto:
Efitrano fanehoan-kevitra voafehin'ny rindrina metaly.
Raha heverina fa ny solika ao amin'ny efitrano fanehoan-kevitra dia deuterium-tritium, sosona akora vita amin'ny lithium izay misintona hafanana avy amin'ny rindrina metaly ary mamokatra tritium.
Misy coils lehibe miteraka sahan'andriamby.
Karazana fiarovana taratra.
Ny reactor fusion inertial confinement dia ahitana:
efitra fanehoan-kevitra, kely noho ny teo aloha, dia voafetra ihany koa ny rindrina metaly.
Ampiasaina amin'ny manamora ny fidiran'ny poti-taratra hazavana na ion avy amin'ny laser.
Manantena aho fa amin'ny alalan'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny karazana orinasa mpamokatra herinaratra misy sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Karazan-jiro
Vokatry ny fahalotoan'ny rano